JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff 1.76.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.76.1 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
Application မ်ား စီးပြားေရး JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff
JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ Find & သင့်ကုမ္ပဏီအစာရှောင်ခြင်းအဘို့အရညျအသှေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုငှားရမ်း! ယနေ့ယောဘနှင့်အတူ, သငျသညျအလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်လက်လီ, ဧညျ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်အလုပ်အတွက်သတိပေးချက်အရနိုင်ပါတယ်။ အစာရှောင်ခြင်းအလုပျကိုရှာပါနှင့်တစ်ခုတည်းကလစ်၌သင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုတည်ဆောက်စေ။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ငှားရမ်းထားတဲ့အလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါသလား အင်တာဗျူးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ & ညာဘက် app မှန်ထမ်းများငှားရမ်း!
ယောဘ TODAY ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအလုပ်အကိုင်များနှင့်အလုပ်ရှင်များန်ထမ်းများငှားရမ်းရှာတွေ့သည့်လမ်း revolutionizes ။ ဒါဟာစာရွက်စာတမ်းမရှိဘဲအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစုဆောင်းမှုင်: အဘယ်သူမျှမရှည် CV ကိုမျှမဖုံးစာတစ်စောင်နှင့်သင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးအပေါ်အချိန်အဘယ်သူမျှမဖြုန်းတန်ချိန်။ လက်ျာဘက်, တော်တော်အေးမြ?
ယောဘ search & TODAY ယောဘသင့်အလုပ်မှာ Building:
1. သွားလာရင်းစဉ်လက်လီအလုပ်အကိုင်များ, ဧညျ့အတွက်အခြိနျပိုငျးအလုပျဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း Find
2. အလုပ်ရှာဖွေရေးစုဆောင်းမှု: ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထား & ချက်ချင်းအလုပ်ရှင်များနှင့်အတူ chat
သင်ခန်းစာန်းကျင် fit မှအခြိနျပိုငျးအလုပျအတှကျရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ပထမဦးဆုံးအချိန်ပြည့်အလုပ်ကိုရှာဖွေနေပါသလား ဧညျ့, စားသောက်ဆိုင်စက်မှုလုပ်ငန်း, စျေးကွက် & လက်လီအလုပ်အကိုင်များအပါအဝင်တိုင်းကဏ္ဍတွင်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာပါ။
+ ဟာတိုတောင်းသောပရိုဖိုင်းကို ဖန်တီး. လျှောက်ထား - မပိုအသုံးစရိတ်အချိန်ရှည် CVs အပေါ်!
+ ရှာရန်အလုပ်စာရင်းများ & သင်သည်သင်၏ရှေးခယျြသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အစာရှောင်ခြင်းအလုပ်ရှာနိုင်အောင်အလုပ်သတိပေးချက်အရ
နောက်ကျမှ-ညဆိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအချိန်ဖျော်ယမကာစပ်များအတွက်ငှားရမ်း? သင့်ရဲ့ဧညျ့န်ထမ်းများပူးပေါင်းမယ့်ဖော်ရွေစားသောက်ဆိုင် server သို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းလိုအပ်ပါသလား?
+ အခမဲ့စာရင်းကသင်၏အလုပ် Publish နှင့်အစာရှောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေ
+ အင်တာဗျူးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ built-in ချက်တင်ကနေတဆင့်သူတို့နှင့်အတူသတင်းစကား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို Love? ပြန်လည်သုံးသပ်စွန့်ခွာပါ
JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff အား အခ်က္ျပပါ
mackenzie စတိုး 22.49k 4.05M
JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.76.1
ထုတ်လုပ်သူ JOB TODAY S.A.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://jobtoday.com/privacy/
App Name: JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff
Release date: 2019-09-11 19:11:40
လက်မှတ် SHA1: D1:39:C9:AE:9A:CC:37:1A:A1:43:3E:6F:6F:35:E3:BC:05:E9:4B:16
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Maxim
အဖွဲ့အစည်း (O): JobToday
နယ်မြေ (L): Luxembourg
နိုင်ငံ (C): LU
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Luxembourg
JOB TODAY: Find Jobs, BuildaCareer & Hire Staff APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ